Sidee si ay u gudbiyaan Videos ka iPod si Mac l
> Resource > Mac > Sidee si ay u gudbiyaan Videos ka iPod si Mac
Waxay leeyihiin qaar ka mid ah videos on your iPod oo aad rabto inaad iyaga lagu wareejiyo si aad Mac? Haddii ay sidaas tahay, waxaad u baahan kartaa video iPod ah in Mac qalab kala iibsiga si ay kuu caawiyaan. Halkan waa mid ka mid ah khayr idiin ah - Wondershare TunesGo (Mac) . Qalabkani waxa uu awood aad si ay u gudbiyaan videos ka iPod si Mac aan dadaal.
Download TunesGo (Mac) si ay u gudbiyaan iPod videos si Mac.
Fiiro gaar ah: Haddii aad computer waddaa Windows 10, Windows 8, Windows XP, Window 7 ama Windows Vista, waxaad isku dayi kartaa TunesGo Wondershare in lagu wareejiyo videos ka iPod in PC socda Windows OS.
Xisbiga ayaa ka hooseeya kuu sheegayaa sidaad u wareejin iPod videos in tallaabo Mac talaabo. Hadda, aan ka eeg tallaabooyinka wada.
Tallaabada 1. Orod video iPod in ay Mac qalab kala iibsiga
First of dhan, rakibi oo ay maamulaan iPod si video Mac qalab kala iibsiga - Wondershare TunesGo (Mac). Qalabkani waxa uu si fiican u shaqeeyaa Mac OS X 10.11, 10,10, 10.9, 10.8, 10.7 iyo 10.6. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPod si Mac. Markaas, iskaan kartaa iPod music, videos iyo sawiro uu furmo suuqa hoose qalab this.
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo (Mac) taageertaa iPod xiriiri 5 & 4 in ay maamulaan macruufka 9, macruufka 8, macruufka 7, macruufka 6 iyo macruufka 5, halka Wondershare TunesGo waa la jaan qaada noocyo badan iPod. Halkan waa faahfaahsan info oo ku saabsan daydo iPod oo ay taageerayaan Wondershare TunesGo .
Tallaabada 2. Transfer videos ka iPod si Mac
Si aad u wareejin ah videos in aad ka hesho Lugood maktabadda si Mac, waa in aad guji Movies, TV muujinaysaa, Podcasts, ama Lugood U si ay u doortaan nooca video ugu horeysay. Markaas uu furmo suuqa maamulka, dooro doonayo videos guji dhoofinta . Markaas, aad u hesho meel si loo badbaadiyo videos dhoofiyo.
Si aad u wareejin videos qaaday oo aad iPod, waa in aad guji Photos tab. Under geed Roll Camera tusaha, guji Video . Markaas, dooro videos oo guji dhoofinta . Marka uu furmo suuqa file browser u muuqataa, heli Jid badbaadiyo in uu kaydiyo videos kuwan.
Cool! Waxaad ku guuleysatay inay nuqul ka videos ka iPod si Mac. Waa quruxsan fudud, sax? Videos sokow, kuu soo gudbin karaa muusig iyo sawiro ka iPod si Mac . Haddii aad lumiso maktabadda Lugood aad, aad xitaa nuqul karaa music ku saabsan iPod in Lugood muuqan.
Hadda, isku day qalab si ay u gudbiyaan iPod video inay Mac.
Solutions ka dib markii Time Machine markii ay ku fashilmeen kaabta